Nhau - Iyo inonyanya kufarirwa bar hookah uye zvinongedzo zvekuwedzera
Pamusoro peiyo hookah yakatungamirwa yakataurwa muchinyorwa chakapfuura, pano ini ndichakurudzira zvimwe zvinoenderana zvine hookah zvinokodzera kutengeswa kwebhawa.
Iyi nzira ndeyekufananidza akajairika magirazi hookahs ane mwenje mwenje mhete kana mabheseni, (sezvakaratidzwa pasi apa). Kubatsira kweiyi nzira kuri nyore uye kuchinjika. Unogona kushandisa mwenje iyi kuenzanisa chero hookah chimiro chaunoda, uye mwenje unogona zvakare kushandiswa. Gadziridza kune chero ruvara iwe rwaunoda kuti ugadzire inoshamisa mamiriro. Ini ndichaunza zvigadzirwa izvi zvakadzama mune ino chinyorwa.
Ichi chigadziko chinotungamirwa chepasi rese chakagadzirwa neacrylic zvinhu, zvinowanzoiswa pasi pegirazi gasi reiyo hookah. Iwe unogona kuiisa kuti ibudise mwenje waunoda, uye hookah ichataridzika pakarepo. Chaizvoizvo magirazi hookahs ese anogona kuishandisa. Kubatsira kwayo ndekwekuti inotakurika, zviri nyore kutsiva bhatiri, uye ine akasiyana maficha.
Iyi iringi yemwenje ye LED, iyo yakaturikwa pasi peye hoh tray. Kazhinji pane nzira mbiri dzekurembedza. Maitiro ekutanga kushandisa magnetism kukwezva. Iyo inouya nemagineti maviri, ayo anogona kukwezva magnetism eplate. Iyo yechipiri nzira ndeye kushandisa maviri-mativi tepi kuinamatira iyo mundiro. Iyi tepi inogona kushandiswazve uye iri nyore kushandisa.
3.Water-kunyudzwa akatungamirira Anopenya Ice Cubes
Mvura-yakanyudzwa LED inovhenekera mazaya echando, muviri unozongoerekana wajeka kana ukaiswa mumvura kana mazaya echando, pasina shanduko yekuchinja, hapana shanduko yemakemikari, isina-chepfu uye isina kukuvadza, uye inogona kuiswa mumhando dzese dzezvinwiwa kuti uwedzere rudo uye mhepo isinganzwisisike.
Inoshandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana zviitiko zvekupemberera kana mabhawa ehotera uye dzimwe nzvimbo, unogona kuzvisanganisa nehookah, uchigadzira yakapfava uye inoyevedza kudanana mamiriro zvisingaonekwe.
Post nguva: Aug-25-2021